:: My Little World ::: မနေ့ က
Posted by Nay Nay Naing at 2/16/2009 11:55:00 AM
အရင်ပိုစ့်မှာတုန်းကလည်း ပူလို့ ညီမနေရထိုင်ရတာ အဆင်မပြေဘူးလို့ဖတ်ဖူးခဲ့တယ်။ ခုလည်း ညီမလေးကို ကြည့်ရတာ သိပ်အဆင်ပြေပုံမရဘူး။ ညီမကိုက အပူဒဏ်မခံနိုင်တာလား။ ညီမ အခန်းနီးချင်းတွေကော ဘယ်လိုလဲ။ သူတို့လည်း ပူတယ်လို့ပြောလား။ ဒီတိုင်း အခန်းပူတာကြောင့် အိပ်ပျက်နေရရင် ရေရှည် အတွက်မကောင်းဘူးထင်တယ်နော်။ ညီမက အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ ပိုဂရုစိုက်ရမယ်။ ရေရှည်အတွက်စဉ်းစားပြီး အခန်းပြောင်းသင့်ရင်ပြောင်းလိုက်ပါလားညီမ။
Monday, February 16, 2009 1:08:00 PM
ချမ်းလွန်းလို့ပါ. အဟင့် :(
Yes...It was very very hot yesterday...I also can't sleep well yesterday night even though I switch on the fan...
မနေ့ညက ပူပါတယ်... ပန်ကာဖွင့်၊ ပြတင်းပေါက်ပါဖွင့်အိပ်ရတယ်..။ မနက်နိုးနိုးချင်း ရေချိုးပစ်ရတယ်..။
အိပ်ခါနီးတိုင်းရေချိူးတယ်။ အခုတလောကတောိ့အိုက်ကို အိုက်ပါတ်ယ်. အဲကွန်းမရှိပါဘူး။ တို့ဆီမှာ။
ကြည် >> ဂရုတစိုက် ပြောတာ ကျေးဇူးပါ။ အခုနေတဲ့ အခန်းက ပူတာကလွဲရင် ကျန်တာ အကုန်နီးပါး အဆင်ပြေပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ လည်း အတော်လေး နီးတယ်။ ဒါကြောင့် ခုချိန်ထိ မပြောင်းပဲ နေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ :)
မမွန် >> အေးတာချင်းတူတူတော့ မမွန် စီမလာတော့ဘူး။ တခြားနေရာပဲ သွားတော့မယ် :P
Shin , Sin Dan Lar , Ma KOM >> ကွန်မန့် တွေဖတ်ပြီး ရာသီဥတုက ပိုပူလာတာမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ အဲယားကွန်းမရှိလည်း ပြူတင်းပေါက်ဖွင့်လို့ ရတယ်၊ လေတိုက်တယ်ဆို အဆင်ပြေတယ်။ ပန်ကာလေကတော့ မကောင်းဘူး။ ပန်ကာ ဖွင့်အိပ်ရင် လက်တွေခြေတွေ ကိုက်လာတယ်။ ညအိပ်ခါနီးတိုင်းလည်း ရေချိုးပါတယ်၊ မဟုတ်ရင် အိပ်မရဘူး။ တစ်နေ့၂ ကြိမ်တော့ အနည်းဆုံး ရေချိုးတယ်။ စနေ တနင်္ဂနွေ အားလပ်ရက်ဆို ၃-၄ ကြိမ် ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီနိုင်ငံရောက်ခါစကဆို တရက် ၅ ခါလောက် ရေချိုးတယ်။ :D
မြတ်စွာဖျား..တရက် ၅ ခါလောက် ရေချိုးတယ်တဲ့...။
ဆးရုံပေါ်က ကောင်မလေး ကို တောက်လျောက် စကားတွေ ပြောပေးတာူသူလဲ ဆေးရုံရောက်ကော နောက်ဆုံးကောင်မလေး လဲအိပ်ပျော် နေပါပြီ။ (ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် N2 ကို သတိရမိသးတယ။် )
N2 ပိုစ်မှာရေးထားတယ်လေ ချစ်သူက အဖော်လုပ်ပေးမယ် ဆိုတာ အဲဒီအကွက်ကလေးက ဆင်နေတယ် အဲဒါကြောင့်သတိရသွားတာပါ။
Saturday, March 14, 2009 12:54:00 AM